Mhlawumbe hhayi indoda ababengeke bathande lezi libalele, osawolintshi, izithelo namanzi futhi okumnandi angavamile. Ngeshwa, lesi sitshalo enikeza la izithelo langa engakhuli e isimo sezulu sifudumele.
Isihloko kungenziwa ngokufingqiwe ufunde ngalezi izithelo ezimangalisayo: amawolintshi zikhule lapho, izici nezimo kwendawo yazo nokunye.
ulwazi olujwayelekile mayelana orange
Igama Botanical zalesi sitshalo - isihlahla orange (Citrus sinensis). Lolu hlobo izithelo zomuthi kungokwalabo uhlobo lwe of ezisawolintshi (umndeni Rutaceae, subfamily orange).
Kusukela ezikhathini zasendulo, amawolintshi etshalwa isiko. thelo abhekwa ezinye okumnandi kakhulu futhi unempilo futhi, ngakho-ke, baziwa emhlabeni wonke. Lapho amawolintshi zikhule, sifunde aphansi. Futhi layo ngaso China.
It isitshalo photophilous bukhule nenhlabathi ukukhanya okuxekethile nobuhlobo konemimoya hlangothi.
Ukuphakama kwesihlahla ifinyelela amamitha 12, kanti isikhathi isilinganiso zokuphila kwakhe - engu-75.
Lokusakaza yisona ngokuvamile ngokuxhunyelelwa, cuttings kanye imbewu.
Ngaphambi wazi lapho amawolintshi zikhule, cabanga ukuthi kuba umuthi. Leli fomu hybrid sitholwa emuva ezikhathini zasendulo bewela izinhlobo ezimbili zezintuthwane ezisawolintshi - tangerine futhi pomelo.
Isihlahla esihlale siluhlaza ngokwayo, nge amahlamvu kunalokho obukhulu futhi icwecwe, amahlumela amasha lapho amagatsha ngokwabo esihambelana ameva esikhulu prickles. Ubukhulu balo encike ngqo kwi ezihlukahlukene. Ende kunazo zonke iphakeme ongafinyelela amamitha 12, kuwo ungene rootstocks yemifino - 6 metres, futhi izitshalo endlini sikhule akukho kuka 2.5 metres ubude. Kukhona futhi izinhlobo ezincane, okuyinto abe ukuphakama 80 cm, ngokukhethekile yenzelwe ukusetshenziswa zasendlini.
Lapho zikhula amawolintshi, ungabona izinto ezimangalisayo. Orange uhlelo impande cishe surface futhi inezici ehlukile okufanele sicabange ngazo lapho ekhula lesi sitshalo. Ngokungafani nezinye izihlahla zezithelo, izimpande orange babe impande izinwele, okuyinto ukukhuthaza ukumuncwa okuhle umswakama kanye nezakhi. Kunalokho, imikhawulo izimpande zikhona cheholchiki inhlabathi isikhunta ephila endaweni ethile eziyinkimbinkimbi nge isitshalo.
Amakhowe aguqule zibe ifomu kufinyeleleke compounds amaminerali (okubaluleke - phosphorus), okuyinto zimuncwe yizimila, futhi esikhundleni uthole ngokwabo amino acid, ama-carbohydrate kanye nezinye izinto ezibalulekile. umphakathi ezinjalo ngokuthi mycorrhizal iqhaza ukuze kwandiswe umkhiqizo ngokwandisa eheha ingqondo impande ebusweni.
Kukhona inkinga ehlobene nokubukisa izenzakalo ezinjalo. isitshalo njalo is kusengozini ngenxa yokuthi mycorrhiza ungeme ukuntuleka kwamanzi futhi kunzima ukubekezelela ukuchayeka ezimpandeni. Ngakho-ke, ku-umhlaba itshalwe nge amawolintshi, okungcono ukugcinwa esimweni ezibalulekile. Kuyinto ukudalwa ngenkasa yokufakelwa.
Lapho eRussia ezikhulayo amawolintshi? Ingabe izimo zezulu izithelo uvuthwe ilanga kuleli zwe? Noma kunjalo, sikhule Abkhazia nasesikhathini Krasnodar esifundeni.
Round emise izithelo orange ngokuthi orange ebabayo noma Hesperides. Ngezinye izikhathi wayephuma polyspermous, multi-umgodi noma seedless kanye nesakhiwo eduze layo berry. Isikhumba ukuthungwa aminyene futhi ethambile ukushuba ka 0.5 cm. Uma uyikha phezulu le ke abushelelezi noma kancane roughened, elikhuhluziwe camera, kanti phansi has a ungqimba elincanyana esimhlophe (albedo).
Ngokuvamile, ikhasi olintshi isisindo afinyelela ku-42% we isisindo ingqikithi ezingenzeka embungwini, futhi umbala waso kungenzeka ogqamile futhi kusukela ophuzi okhanyayo ukuba ngokubomvu shades of orange.
Ngokuvamile isithelo ukungaguquguquki aminyene futhi nokunwebeka. mass Inner it is ahlukaniswe izikhala noma wedges (13 nama-PC.) Egcwele amaseli esikhulu kakhulu futhi uginindela namanzi ne bumnandi, okumuncu-amnandi noma omuncu nebabayo.
Iningi izinhlobonhlobo amawolintshi has nembewu emhlophe. Futhi, kunezinhlobo zezitshalo seedless, izithelo zazo ikhiqizwa ngaphandle impova (parthenocarpic).
Lapho amawolintshi sikhule - kunoma yiliphi izwe emhlabeni?
Growing ezisawolintshi izithelo (kuhlanganise amawolintshi) ezimweni nakwezifudumele futhi lemvula, lapho imnene Ubusika futhi elishisayo, okuyinto ilungele ukukhula zalesi sitshalo. Kodwa kusifunda ngasinye sihlakulele ezisawolintshi zabo izinhlobo.
Amawolintshi Engenawo Umbala ezikhulayo emazweni amaningi - kusukela China eYurophu. Izitshalo zokuqala ayesekhulile eChina, lapho bebehlala khona: silethwe izinkantolo amabhange eYurophu.
Kusese amazwe ngokuya okhulayo lezi izithelo okumnandi angavamile. Amawolintshi okumnandi kakhulu etshalwa libalele Turkey, Egypt, Spain, India, iMelika neChina. Avame kakhulu kubonakala emashalofini yabathengi.
Futhi etshalwa eGreece, e-Italy, i-Algeria, Portugal, Morocco, e-Afrika, Japan, Australia, iBrazil nokunye.
Ekuphetheni, le zilwane esiyingqayizivele
Phakathi ezisawolintshi adle futhi ama-blood orange. Lapho ukukhula? Izici zazo, yebo, siwukuthi bangamalungu ubomvu.
Izwe labo zomlando kubhekwa Sicily. Kusolwa ukuthi izimo zezulu zalezi zindawo zibangelwa izakhi zofuzo okuqondiswa umbala owolintshi izithelo.
Ama-blood orange zinhle ngoba ezinezinhlamvu ambalwa. Ethandwa kakhulu phakathi kwazo orange Italian onesihloko esithi "tarokko". He is impela namanzi futhi elimnandi, kodwa ngeke ebomvu njengegazi ezihlukahlukene-Spanish "sangvinello". Tarocco lihunyushwa lisuselwa Italian ngokuthi "ukukhohlisa" (ngakho ngalisho kanye umlimi kuqala wabona lesi sithelo red).
Indlela yokutshala onsundu engadini
Ukuminyana acinene - Ukwelashwa